मनोरञ्जन Archives - Abhiyan news
२१ बैशाख २०७९, बुधबार ०३:१३ अभियान न्यूजLeaveaComment on राजु लामाले गए विश्वकै अग्लो स्थानमा गीत
गायक राजु लामाले पृथ्वीको अग्लो स्थानमा गीत गाएर विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना जगाउन सगरमाथा आरोहण अभियानका क्रममा रहेका उनले क्याम्प २ र क्याम्प ३ को बीचमा बसेर कन्सर्ट गरेका हुन् । उनले सोमबार समुद्री सतहबाट ६,५७४ मिटरको उचाइमा पुगेर गीत गाए । ‘३,६०० मिटरभन्दा माथिको उचाइमा गीत गाउन त्यति सजिलो छैन […]
२१ बैशाख २०७९, बुधबार ०३:०८ अभियान न्यूजLeaveaComment on वामदेवको शब्दमा चुनावी गीत ‘जनता जगाउने कलममा छाप लगाउने’ सार्वजनिक
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को चुनावी गीत ‘जनता जगाउने कलममा छाप लगाउने’ सार्वजनिक भएको छ । मुस्लिम इतेहाद संगठन नेपालले निर्माण गरेको गीतमा वामदेव गौतमका शब्द रहेको छन् । कृष्ण केसी र जुना श्रीष मगरको स्वर रहेको गीतमा कृष्ण केसीकै संगीत छ । गीतमा जनता जगाउने, विकासको लहर चलाउने समाजवादी पार्टी भएको बताइएको छ […]
८ बैशाख २०७९, बिहीबार १६:०९ अभियान न्यूजLeaveaComment on बिहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै केकीले भनिन्, यहाँहरूको आशीर्वादको अपेक्षा छ !
अभिनेत्री केकी अधिकारी विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन्। व्यवसायी रोहित तिवारीसँग उनले बिहीबार विवाह गरेकी हुन्। केकी र रोहित दुवैले विवाहबारे नखुलाए पनि बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको मेहेन्दी समारोहको तस्बिर बाहिरिएको थियो। बिहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै केकीले आफूहरूले जीवनको नयाँ अध्याय सुरू गरेको बताएकी छन्। उनले दर्शकसमक्ष विवाहको समाचार बाँड्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्त खुसी लागेको […]
भर्यस्टायल सिङ्गरतर्फ लक्षुप्रकाश मल्लले यसवर्षकाे `ज्याेति फिल्मस् म्युजिक अबार्ड´ पाए
१६ चैत्र २०७८, बुधबार ०५:२७ अभियान न्यूजLeaveaComment on भर्यस्टायल सिङ्गरतर्फ लक्षुप्रकाश मल्लले यसवर्षकाे `ज्याेति फिल्मस् म्युजिक अबार्ड´ पाए
गायन क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्थापित बन्दै गायक लक्षुप्रकाश मल्लले यसवर्षकाे `ज्याेति फिल्मस् म्युजिक अबार्ड´ पाएका छन । भर्यस्टायल सिङ्गरतर्फ उत्कृष्ट बनेका उनलाई एक समारोहकाबीच अबार्ड दिइएको हो । गायक मल्लले यसैवर्ष स्टार म्युजिक एण्ड फिल्मस् अवर्ड,मनास्लु ईन्टरनेटनेशनल आईकन अवर्ड गायन बिधाबाट प्राप्त गरेका थिए । गतवर्ष मनास्लु राष्ट्रिय अवर्डसमेत हातपार्न सफल मल्ल नेपालकाे सबै भन्दा […]
११ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०२:४७ अभियान न्यूज1 Comment on कलाकार जयनन्द लामाको निधन
कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ । कलाकार लामाको बुधबार बिहान २ बजे निधन भएको हाँस्य कलाकार शिवहरि पौडेलले जानकारी दिए । पछिल्लो समय चलचित्र अभिनयमा व्यस्त रहेका लामाले ‘कलकत्ते काइँयो’ लगायतका चर्चित गीतहरू गाएका थिए । पाँच दशकअघि गायन यात्रा शुरू गरेका लामाले लोकगीत, दोहोरी, गिती नाटक गरि दुई सयभन्दा बढी गीत गाएका छन्। […]
विवेक रसाइली को निर्देशन मा ‘रानी ‘ !
६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०३:०३ अभियान न्यूजLeaveaComment on विवेक रसाइली को निर्देशन मा ‘रानी ‘ !
गायक अमित बरालले नयाँ गीत ‘रानी’ सार्वजनिक गरेका छन् । यो गीत भिजुअल आर्ट्स नामक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । पुष्पन प्रधानको संगीत रहेको गीतमा कमल रेग्मीको शब्द रचना छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा गायक अमितसँगै उनकी धर्मपत्नी इशा बरालले अभिनय गरेका छन् । दम्पतिको प्रेमिल सम्बन्धलाई उजागर गरेको गीतको भिडियोमा इशा रानी बनेकी […]
५ पुष २०७८, सोमबार ०३:१९ अभियान न्यूजLeaveaComment on फेरि प्रसारण हुने ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द भएको केही समयपछि फेरि यसलाई नयाँ तरिकाले प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको छ । यो शोलाई जीतु नेपालले नै होस्ट गर्नेछन् । शोको नाम पनि ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ नै राखिएकोे छ । यो शोलाई अब दिनेश डीसीले निर्देशन गर्ने भएका छन् । तर, कुन टीभीबाट प्रसारण गर्नेमा भने पक्का भएको छैन ।’ […]
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:१७ अभियान न्यूजLeaveaComment on बन्द हुने भयो, ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’
हाँस्य कलाकार जितु नेपालले संचालन गर्दै आएको रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को प्रशारण आउँदो सातादेखि बन्द हुने भएको छ । डेढ बर्ष भन्दा लामो समयदेखि नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै आएको यो शो आउँदो साता प्रशारण भएपछि बन्द हुने यसका संचालक जितु नेपालले पुष्टी गरे । जितुले यो शो बन्द भएपछि आफूले केही समय विश्राम लिने […]
८ कार्तिक २०७८, सोमबार ०३:०३ अभियान न्यूजLeaveaComment on पल शाह संगको सम्बन्धबारे लेखिन समिक्षा अधिकारीले लामो स्टाटस ?
गायिका समिक्षा अधिकारीले आफु र पल बिचको सम्बन्धको बिषयमा आएको समाचार प्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन। उनि र पल बिचको सम्बन्धलाइ लिएर मिडियामा अहिले अनेक हल्लाहहरु छन।पल र समिक्षा बीच अनैतिक सम्बन्ध रहेको र २ बर्ष भित्र बिहे गर्नु पर्ने भन्दै एक मिडियाबाट आएको समाचार पछि यी जोडीलाई लिएर दर्शकले बिभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन। यता […]
३ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:३४ अभियान न्यूजLeaveaComment on फेसबुकको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी, के रहला त अव नयाँ नाम ?
फेसबुकले नाम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । मेटाभर्स परियोजनालाई दर्शाउने गरी कम्पनीले आउँदो साता फेसबुककाे नाम परिवर्तन गर्ने भएको हो । कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले आउँदो २८ तारिखमा आयोजना हुने वार्षिक कार्यक्रम ‘कनेक्ट कन्फ्रेन्स’ मा कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । नाम परिवर्तनको विषय उक्त कार्यक्रमअघि नै घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको […]